Daadadka ayaa tilmaamaya in Asus ay diyaariso Zenfone leh kamarad seddex geesood ah iyo 10 "kiniiniyada OS OS OS | Androidsis
Haaruun Rivas | | Mobiles, Noticias, Kiniiniyada Android
Sida laga soo xigtay mala awaal kala duwan, shirkadda Shiinaha, Asus, waxay si adag uga shaqeyneysaa inay ku hirgeliso buugyaraha ay ku jirto taleefan leh sedex kaamero sedex ah oo ku dhegan qeybta dambe, oo la mid ah kuwa qaada cusub Huawei Mate 20. Sidoo kale, diyaarinta kiniin cusub oo nooc ah ayaa la xaqiijiyay.
Daadku wuxuu ka yimid Roland Quandt. Sida laga soo xigtay isaga, ASUS waxay dhawaan soo saari doontaa telefoon cusub oo Zenfone ah oo leh nambarka nambarka ZB634KL kaas oo yeelan doona qaabeynta kamaradda kor ku xusan.
Blog-ka tiknoolajiyadda Ruushka, Telefoonka gacanta, ayaa yidhi taleefanka ayaa hubaal ah inuu yahay bedelka kan Zenfone Max Pro (M1), oo ku saleysan labada alifbeetada ugu horeysa nambarka nambarka (ZB) oo la mid ah kan Max Pro (ZB601KL). Boggu wuxuu intaa ku darayaa in tirada "63" ee nambarka nambarka ay ka dhigan tahay taas wuxuu yeelan doonaa shaashad dhan 6.3-inji, halka alifbeetada "K" iyo "L" ay muujinayaan processor Snapdragon iyo 4G LTE taageero, siday u kala horreeyaan. Sida jirta, ASUS ZB634KL waa inay u bilaabataa sidii Zenfone Max Pro (M2).
ASUS ZenFone ZB634KL waa in ay bilowdaa "SOON" ™. Wuxuu la yimaadaa qaab dejineed oo seddex gees ah.
- Roland Quandt (@rquandt) November 12, 2018
Laakiin taasi maahan kaliya taleefanka Max ee horumarinta. Waxa kale oo jira ASUS ZB632KL, oo ​​waliba leh a dejinta kamarad saddex-laab ahiyo sidoo kale ZB631KL iyo ZB633KL. ZB633KL waxaa loo maleynayaa inuu yahay Zenfone Max (M2).
ASUS ZB634KL waxaa la rumeysan yahay inuu yahay bedelka Zenfone Max Pro (M1). Telefoonada mooyee, ASUS waxay sidoo kale ka shaqeyneysaa kiniiniga OS OS mana la yaabno. Ka dib markii la bilaabay Google Pixel SlateWaan ognahay inay tahay waqti uun ka hor inta soo saarayaasha kale ay ku boodaan boodhka. Waxaa intaa sii dheer, iyadoo iibinta kiniiniga Android uu sii socdo hoos u dhac sanad walba, Chrome OS ayaa laga yaabaa inay tahay wadada loo maro. Kiniiniga ASUS Chrome OS wuxuu yeelan doonaa shaashad 10-inji ah waxaana laga yaabaa in lagu soo bandhigo CES 2019 bisha Janaayo.
Iyo tan ugu dambeysa: "waa inay bilawdaa" SOON "oo ay weheliso ZB631KL & ZB633KL, aka Zenfone Max Pro (M2) iyo Zenfone Max (M2). Weli wax calaamado ah oo ZB632KL
Лазарев @ег (@LaOlTomsk) November 12, 2018
Chrome OS waxay bixisaa dhowr astaamo oo faa'iido u leh soo saaraha iyo adeegsadaha. Marka hore, nidaamka qalliinka waa isku mid dhammaan qalabkaiyadoon loo eegin soo saaraha. Ma jiraan maqaarro caado u ah sida aad ku haysato taleefannada Android, sidaa darteed adeegsadaha isticmaalaha ayaa iswaafaqsan.
Ha la yaabin markii ASUS ay soo saarto waxa aan u maleynayo inay tahay kiniinkeedii ugu horreeyay ee Chrome OS ~ shaashadda 10inch. Ma noqon karaa mid ka mid ah aaladaha aan ku aragno #CES2019.
Dhinaca kale, cusbooneysiinta waxaa wax ka qabta Google isla markaana loo geeyaa dhammaan aaladaha isla waqtigaas. Google wuxuu leeyahay qalabyada Chrome OS waxay heli doonaan cusbooneysiinta ugu yaraan 6 sano tan iyo markii jajabku ka muuqday madal.
Wadada buuxda ee maqaalka: Androidsis » Aaladaha Android » Mobiles » Daadadka ayaa tilmaamaya in Asus ay diyaariso Zenfone leh kamarad seddex geesood ah iyo kiniin 10 ″ Chrome OS ah